Xashiishadda Caafimaadka ee Yar Yar 2019 • Dawooyinka Inc.eu
Sanadka 2019, xashiishadda dawooyinka cannabis ka yar waxaa soo saaray farmasiiyada dawliga ah markii ugu horaysay sanado. Markii ugu horeysay tan iyo sanadkii 2017, waxay hoos uga dhacday 50.000. Xaddiga xashiishadda dawada ee saliidda ku saleysan waa qiyaastii 55 boqolkiiba wadarta, ayuu qoray wargayska FF..
Sanadkii 2017, farmashiyaasha bulshada waxay bixiyeen xashiishad caafimaad oo qiyaastii 53.000 jeer ah. Sanadkii 2018 tani waxay ka badneyd 51.000 jeer. Sannadkan tirakoobyadu way sii xumaadeen oo sida ay xisaabisay SFK waxay gaadhay 48.500. Hoos u dhacaani ma sii socon doonaa sanadka 2020 mise waxaa jiri doona cilmi baaris cilmiyaysan oo si rasmi ah u xaqiijineysa saameynta xashiishada dawada?
Beerista dhirta haramaha ah ee Nederland waxay hoos imaaneysaa Xafiiska Xashiishadda Daawada (BMC), oo iyadu hoos imaan doonta Wasaaradda Caafimaadka, Daryeelka iyo Cayaaraha. Alaabada ugu weyni waa shirkada mega ee Bedrocan, oo si buuxda u buuxisa shuruudaha tayada adag ee loo dejiyey soo saarida xashiishadda dawooyinka.
CBD iyo saliida xashiishadda
Waxaa cajiib ah in xashiishadda ku jirta qaab saliid loo isticmaalo marar badan. Tani waxay si muuqata kor ugu kacday sannadihii ugu horreeyay illaa iyo 2015. Tirada ayaa hadda ah mid deggan oo wali 55 boqolkiiba sii socota. Sidoo kale dukaamada smart iyo webka CBD- saliida si weyn caan uga ah macaamiisha, kuwaas oo u isticmaala cabashooyinka iyo xanuunno badan. Faa'iidada ugu weyn ee saliidda xashiishadda ayaa ah in macaamilku si fudud u qaadan karo oo u qaadan karo.
Si kastaba ha noqotee, faallo waa in halkan laga sameeyaa. Halka saliida CBD si xor ah looga heli karo oo uusan ku hoos dhicin Sharciga Opium waa THCsaliid ama xashiishad ma aha. Marka la barbardhigo CBD, Thc waa walax firfircoon oo firfircoon waxayna hoos timaadaa Sharciga Opium. Jarmalka gudaheeda, xashiishka caafimaadka waxaa sidoo kale loo isticmaalaa ujeedooyin daaweyn. Beljamka tan wali sharci ma xakamayn, taas oo macnaheedu yahay in qiyaastii 10 ilaa 15 boqolkiiba xashiishada dawada loogu talo galay bukaanada Beljamka.
Akhri wax dheeraad ah sfk.nl (Xigasho)
CBDsaliid cbddaawada cawskaNederlandTHCsaliida cannabis
Daraasadda Arthritis: 300% ayaa kordhay isticmaalka xashiishadda ee bukaannada qaba cudurrada rheumatic -ka
Daraasad lagu daabacay joornaalka caafimaadka Arthritis Care & Research ayaa lagu ogaaday in tirada…
Dhaqdhaqaaq taariikhi ah, Scotland waxay furi doontaa khadka tooska ah si ay u bixiso kaalmo xirfadeed iyo raaxo…